IFTIINKACUSUB.COM: Waa tuma Kalkaalisadii caafimaad ee ugu horeysay Aduunka?
Waa tuma Kalkaalisadii caafimaad ee ugu horeysay Aduunka?
Kalkaalisadii ugu horeysay waqtigan casriga ah waxa la odhan jiray Florence Nightingale, waxay ahayd gabadh u dhalatay wadanka Igiriiska, kana qaybgashay dagaalkii Crimean War, oo dhacay inti u dhaxaysa 1853 dii ilaa 1956 dii. Nightingale waxay u adeegaysay ciidamada ayadoo u qabanaysay shaqada kalkaalisada
caafimaadka ee ah in la daweeyo dadka ku dhaawacma dagaalka.
"الواجب أن تكون الطبيبات مختصات للنساء ، والأطباء مختصين للرجال إلا عند الضرورة القصوى إذا وجد مرض في الرجال ليس له طبيب رجل ، فهذا لا بأس به ، والله يقول : ( وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه ) الأنعام / 119″. انتهى من رسالة ” فتاوى عاجلة لمنسوبي الصحة ” ص 29 .
"Waajibku waa in haweenka dhakhaatiirta ah ay ku takhasusaan dumarka, raga dhakhaatiirta ahna ay ku takhasusaan raga, marka laga reebo wixii ay daruuro adag keento. Hadii raga cudur laga helo oo aanu jirin nin dhakhtar ah, markaas wax dhib ah malaha. Allahna wuxuu leeyahay: (xaqiiqadu waa laydiin cadeeyey wuxuu idinka xarrimay, marka laga reebo wixii aad ku qasbanaataan) Ancaam/119".